အနှောက်ယှက်ပေးလွန်းတဲ့ Bloatware တွေကို ဘယ်လို ဖျက်ကြမလဲ? – AkahyarMedia
အနှောက်ယှက်ပေးလွန်းတဲ့ Bloatware တွေကို ဘယ်လို ဖျက်ကြမလဲ?
Bloatware ဆိုတာ အရိုးရှင်းဆုံး ပြောရရင် ဖုန်းနဲ့ Pre-installed လုပ်ပြီးသား App တွေလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။​ ကိုယ့်အတွက် အမှန်တကယ် အသုံးမဝင်ဘဲနဲ့ အလကားနေရင် ရှိနေတာတွေကို ခေါ်တာပါ။ Software တစ်ခုဟာ မလိုအပ်ပဲ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ Performance ကိုယူသုံးနေတယ်ဆိုရင် အဲ့ Software ကို Bloatware လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။
အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာပေးရရင် ကိုယ်ဝယ်လိုက်တဲ့ ဖုန်းမှာ Google Music ဆိုတာပါလာတယ်ဆိုပါတော့၊ ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဖုန်းက Xiaomi ဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ်ကလည်း သီချင်းနားထောင်ဖို့ဆိုရင် Mi ရဲ့ Original Music App ကိုပဲသုံးတယ်ဆိုရင် အဲ့လိုအပိုပါလာတဲ့ Google Music ကို Bloatware လို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ ဖြစ်ဖူးလား။​ ကိုယ့်ဖုန်းမှာ ဝယ်လာကတည်းက Calendar နှစ်ခု၊ Video Player နှစ်ခု၊ Browser နှစ်ခုဖြစ်နေတာမျိုးတွေ။ အဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ မလိုပဲပိုနေတဲ့ဟာက Bloatware ပါပဲ။
အဲ့မှာ Custom UI တွေဖြစ်တဲ့ Funtouch OS (Vivo) ၊ ColorOS (OPPO) ၊ OneUI (Samsung) နဲ့ MIUI (Xiaomi) ဆိုပြီး Pure Android ကြီးကို Skin တစ်ခု အုပ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာ သုံးရတဲ့ Experience ကွာသွားသလို ခုနပြောနေတဲ့ ဘလုတ်ဝဲ တွေပိုပါလာပါပြီ။
Bloatware တိုင်း မကောင်းဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ တပ်အပ် သတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး။အလိုလိုပါလာတဲ့ Youtube တို့ Facebook တို့ဆိုမျိုးဆိုရင် သက်သက်သွင်းစရာမလိုတော့တဲ့အတွက် အလုပ်ရှုပ်တောင် သက်သာစေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့တချို့ Blaotware တွေဆိုရင် User Friendly မဖြစ်ဘဲ Annoying ဖြစ်စေတာမျိုး၊ Permission ကို Miss-use လုပ်ပြီး ချိုးဖောက်တာမျိုးက စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းပါတယ်။
ဘာတွေ စိတ်ညစ်စရာ ကောင်းလဲဆိုရင်ဒီ Bloatware တွေက Background Usage သုံးပြီး Updates သွားလုပ်နေရင် မလိုအပ်ဘဲ Performance ကျသွားတတ်ပါတယ်။
တခါတလေ ယောင်ပြီး Permission သွားပေးမိထားပြန်ရင် ကြော်ငြာ Ads တွေ ၊ Notification Box တွေနဲ့ ထပ်ပြီး နှောက်ယှက်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Memory Usage ပိုများလာသလို Background Usage Overload ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ဖုန်းလေးပြီး ဘက်ထရီ အကုန်မြန်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုသတိပြုစေချင်တာက Bloatware နဲ့ Adware ဆိုတာမတူပါဘူး။ Adware ဆိုတာ App တခုခုက ကိုယ့်ရဲ့ Data တွေကိုကိုယ်မသိအောင် အသုံးပြုပြီး ကြော်ငြာကြီး ဗြုန်းဆိုကြလာတာမျိုး၊ Pop-up Notification တွေနဲ့ Screen အလယ်ကြီးမှာ Download ဆွဲဖို့၊ 18+ Content တွေနဲ့ တမင်မြူဆွယ်ပြီး App ကို Download ဆွဲပါဆိုပြီး ပလိန်းကြီး လာခွပ်တာမျိုးတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ App မျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Bloatware ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်အတွက် မလိုအပ်ပဲ အပိုတွေလုပ်နေတဲ့ Apps တွေကိုခေါ်ပါတယ်။
Adware တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ Privacy ကိုအဓိက Target ထားပြီးတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဖုန်းထဲမှာရှိနေရင် ချက်ချင်း ဖျက်ထားသင့်ပါတယ်။
Adware လောက်တော့ မဆိုးပေမယ့် ဖုန်းထဲမှာကိုယ့်အတွက် မသုံးမဝင်တဲ့ Bloatware တွေရှိနေရင်ရော? ရှင်းလိုက်တာမကောင်းဘူးလား။ ဒါကြောင့် အသုံးမတည့်တဲ့ Bloatware တွေကိုဖျက်ပစ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဒီ Article မှာပြောပြချင်ပါတယ်။
Bloatware တွေကို Uninstall မလား Disable မလား
နဂိုပါလာတဲ့ Bloatware App တွေဟာ သာမန်အားဖြင့် ဖျက်ပစ်လို့မရပါဘူး။ ပိတ်ပစ်လို့ပဲရပါတယ်။ ဆိုလိုတာက Uninstall လုပ်လို့မရပါဘူး Disable ပဲလုပ်လို့ရပါတယ်။ Uninstall လုပ်ချင်ရင်လည်း နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ Bloatware တွေကို Disable/ Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ သူ့ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးနဲ့ကိုယ်စီတော့ရှိပါတယ်။
Bloatware တစ်ခုကို Uninstall လုပ်ပစ်တယ်ဆိုတာ အဲ့ App နဲ့ပက်သက်သမျှ Files တွေကို System ကနေ အပြီးအပိုင် ထုတ်ပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Uninstall လုပ်တဲ့နည်းကတော့ Bloatware ကိုအပြီးအပိုင်ရှင်းထုတ်ပစ်လိုက်ရတာဖြစ်လို့ နောက်တစ်ခါ လုံးဝ စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ဖို့ လုံးဝအာမခံလိုက်သလိုပါပဲ။
ဒါပေမယ့် အဲ့ Bloatware ကိုမှီခိုနေတဲ့ အခြား App တွေအတွက်တော့ ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်က Google Service တွေကို Bloatware အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပြီးဖျက်မိလိုက်မယ်ဆိုရင် သူ့ကို မှီခိုနေတဲ့ Google Apps တွေအလုပ်လုပ်တော့မှာမဟုတ်သလို Google Apps ကိုမှိခိုနေပြန်တဲ့ အခြား App တွေလည်း ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
Disable လုပ်တာကျတော့ ကိုယ်မသုံးချင်တော့လို့ ခေတ္တပိတ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Uninstall လုပ်ရတာလောက် Risk မကြီးပါဘူး။ Bloatware တစ်ခုကို Disable လုပ်ချင်းအားဖြင့် Background Usage ကို ရပ်တန့်ပစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ App ကနေပြီး Memory လုံးဝမသုံးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် မလိုအပ်ပဲ RAM ကိုမရှုပ်စေတာ့ပါဘူး။ Disable လုပ်တာဟာ Uninstall လုပ်သလို လုံးဝ ဖျက်ပစ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် ဖုန်းထဲမှာတော့ရှိနေဦးမှာပါ။ အလုပ်မလုပ်တာပဲဖြစ်တဲ့အတွက် လိုအပ်လို့ပြန်သုံးချင်ရင် အချိန်မရွေးပြန်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
Bloatware ကို Disable လုပ်ခြင်း
ဖုန်းတိုင်းမှာ Bloatware တွေကို စိတ်ကြိုက် Uninstall လုပ်ခွင့်မပေးထားပါဘူး။ ဒါကြောင့် Disable လုပ်တဲ့နည်းကို အရင်ပြောချင်ပါတယ်။
Android ဖုန်းတွေဟာ OEM မတူဘူးဆိုတော့ ယေဘုယျနည်းလမ်းအရပဲ ဖော်ပြပါ့မယ်။
Settings ကနေပြီး Apps Management, Apps and Notifications စတဲ့ ကိုယ့်မှာသွင်းထားတဲ့ Applications တွေအကုန် ကြည့်လို့ရမယ့်နေရာကိုသွားပါ။
App တစ်ခုခုကို ဝင်လိုက်ရင် Uninstall ဒါမှမဟုတ် Disable နဲ့ Force Stop ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဖျက်ချင်တဲ့ Bloatware တစ်ခုကိုဝင်ပြီး Disable မလုပ်ခင် Permissions ကနေ ဖြစ်နိုင်ရင် အကုန်ပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးမှ Disable လုပ်ပါ။ ဒါဆို Bloatware အနေနဲ့ Disable လည်းဖြစ်သွားသလို့ ကိုယ့် Device ဆီကနေလည်း ဘာ Permission မှမရတော့ပါဘူး။
Xiaomi သုံးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ MIUI နဲ့အတူပါလာတဲ့ Ads Bloatware တစ်ခုရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဖုန်းသုံးနေတဲ့ Usage Pattern တွေကို Xiaomi ကိုပို့ပြီး Ads တွေပြန်ပို့တဲ့ Bloatware ပါ။ အဲ့တာကို ဖျက်ချင်ရင် Settings > Additional Settings > Authorisation & revocation မှာသွားပြီး msa ကိုပိတ်လိုက်ပါ။
Bloatware တွေကို Unistall လုပ်ခြင်း
ကိုယ်က Bloatware တွေကို အပြီးဖျက်ပစ်ချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ Android ဖုန်းကို Root လုပ်ခြင်းကသာလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Manufacturer တွေက သူတို့ Pre-install လုပ်ထားတဲ့ App တွေကို ဖျက်ခွင့်မပေးပါဘူး။
Root ဖောက်တ​ယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ရဲ့ Android ဖုန်းကို Super User တစ်ယောက်အနေနဲ့ အမြစ်လှန်ပြီး အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခွင့်မပြုထားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ Bloatware တွေ ဖျက်ပစ်တာမျိုးတွေကို လုပ်နိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် Root ဖောက်ခြင်းဟာ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ Warranty နဲ့ Security ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပြီး အခန့်မသင့်လို့ အသုံးမတည့်ရင် ကိုယ့်ဖုန်းကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်တ​ယ်ဆိုတာကိုတော့ အထူးသတိပြုဖို့လိုပါတယ်။
Root ဖောက်ပြီးတဲ့ Device မှာ Uninstall ဖို့ခွင့်မပြုထားတဲ့ Bloatware တွေကိုဖျက်မယ်ဆိုရင် System App Remover (ROOT) ဆိုတဲ့ App ကိုဒေါင်းပြီး စိတ်ကြိုက် ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
Bloatware တွေကို ဖျက်တော့မယ်/ ပိတ်ပစ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အတွက်တကယ်မလိုသလား၊ အဲ့ဒီ Bloatware ကိုမှီခိုနေတဲ့ App တွေရှိသလား ဆိုတာကိုဂရုပြုပြီးမှ ဆက်လုပ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ အရမ်းမျက်စိရှုပ်ပြီး အသုံးမဝင်တဲ့ Bloatware တွေကိုလည်း ဒီနည်းတွေအသုံးပြုပြီး ပိတ်ခြင်း/ဖျက်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ Performance, RAM Usage နဲ့ Battery ကိုချွေတာနိုင်ပါတယ်။
Source: Android Pit ၊ Lifewire
Reno2 | 2F စမတ်ဖုန်းတွေကို မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ OPPO Previous post
5G မှာနောက်ကျနေပေမယ့် ဆရာကြီးလုပ်ပြတော့မယ့် 2020 iPhone Next post